ရင့်ကျက်လာတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် လက်ခံလိုက်ရတဲ့ နာကျင်စရာကိစ္စများ - Achawlaymyar
သိလာတာများတဲ့နောက်မှာတော့ ဘာမှ မသိတဲ့ အချိန်ကို ပြန်ရောက်ချင်မိတတ်ကြပါတယ်။
ဘာမှ မသိတဲ့အချိန်မှာတော့ မရင့်ကျက်မှုတွေ ရှိနေပြီး ရင့်ကျက်လာတဲ့သူတွေရဲ့ တန်ကြေးကတော့ တစ်ချို့ နာကျင်မှုတွေကို လက်ခံလိုက်ရခြင်းပါပဲ။
ရင့်ကျက်လာတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကတော့ မသိနားမလည်တဲ့အချိန်ထက် ပိုပြီး နာကျင်မှုတွေ များလာပါတယ်။ ဒါတွေကတော့….
(၁) အနားကသူတွေက သစ္စာဖောက်နိုင်တယ်ဆိုတာ
မသိနားမလည်တဲ့ အချိန်မှာတော့ ကိုယ့်အနားက ယုံကြည်ရတဲ့သူက သစ္စာဖောက်သွားရင်လည်း နာကျင်ပြီး ခံစားရတဲ့ အခြေအနေပဲ ရှိပါတယ်။
ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ဒီလို အခြေအနေတွေ ရှိတတ်တယ်ဆိုတာကို တွေးပြီး နာကျင်ရတာ၊ သိလေလေ နာကျင်လေလေနဲ့ အနားကလူတွေကို သံသယ ထားရှိမှုနဲ့ ယတိပြတ် မယုံနိုင်မှုတွေ ရှိနေရတာကတော့ ရင့်ကျက်သူတွေရဲ့ နာကျင်မှု တစ်ခုပါပဲ။
(၂) ကိုယ့်ကိုယ်တောင် ယတိပြတ်ယုံလို့ မရဘူးဆိုတာ
ငယ်ငယ်ကတော့ ငါက ဘာဆိုပြီး လက်မ ထောင်နိုင်ပေမယ့်လည်း တဖြည်းဖြည်း အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ရင့်ကျက်မှုတွေ စတင်လာပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ကိုယ်ထင်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်ရဲ့ စိတ်ဆိုတာကလည်း အခုချိန်မှာ အဲ့စိတ် မဟုတ်တော့ဘဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ရင့်ကျက်လာတဲ့နောက်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ဘယ်လိုပါဆိုပြီး ယုံဖို့ မလွယ်တာကို လက်ခံလာရတာကတော့ အမှန်တရားပါပဲ။
(၃) ချစ်ရတဲ့သူက စွန့်ခွာသွားနိုင်တယ်ဆိုတာ
ငယ်ငယ်ကတော့ ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူက အမြဲတမ်း ချစ်နေမှာဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ရှိဖူးကြမှာပါ။
ဒီလို သိတာမျိုး ရှိခဲ့တာကြောင့် ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူတွေက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ထားသွားကြမှာကို သိနားလည်နေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် နာကျင်မှုကို သိတဲ့သူက ပိုပြီး ခံစားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) ဖြစ်ချင်တိုင်းလည်း ဖြစ်ဖို့ မလွယ်ဘူးဆိုတာ
ငယ်ဘဝမှာတော့ ဖြစ်ချင်တဲ့ အိပ်မက်၊ ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကို ရအောင် လုပ်မယ်ဆိုတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
တကယ်တမ်း ဘဝကို ရုန်းကန်ရတဲ့အခါ ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေ ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလည်း အကြောင်းအကျိုးတွေက အဆင်ပြေဦးမှဆိုတာကို သိနားလည်မိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ပျော်လို့ ရတာမျိုး နည်းလာပါတယ်။
(၅) ကိုယ် မထင်ခဲ့ပေမယ့် အမှားတွေ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာ
ကိုယ် ရိုးရိုးလေး လုပ်ခဲ့တဲ့ အရာတွေက အနာဂတ်ရောက်တဲ့အခါ ကိုယ် မလိုချင်တော့တဲ့အရာ ပြန်ပြင်ချင်မိတဲ့အရာတွေ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ရင့်ကျက်လာသူတွေက ကိုယ် လုပ်သမျှ အရာတွေကိုတောင် အမှားများ ဖြစ်မလား စိုးရိမ်ရင်း ရှင်သန်မိတတ်ကြပါတယ်။
ရငျ့ကကျြလာတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျ လကျခံလိုကျရတဲ့ နာကငျြစရာကိစ်စမြား
သိလာတာမြားတဲ့နောကျမှာတော့ ဘာမှ မသိတဲ့ အခြိနျကို ပွနျရောကျခငျြမိတတျကွပါတယျ။
ဘာမှ မသိတဲ့အခြိနျမှာတော့ မရငျ့ကကျြမှုတှေ ရှိနပွေီး ရငျ့ကကျြလာတဲ့သူတှရေဲ့ တနျကွေးကတော့ တဈခြို့ နာကငျြမှုတှကေို လကျခံလိုကျရခွငျးပါပဲ။
ရငျ့ကကျြလာတဲ့ အမြိုးသမီးတှကေတော့ မသိနားမလညျတဲ့အခြိနျထကျ ပိုပွီး နာကငျြမှုတှေ မြားလာပါတယျ။ ဒါတှကေတော့….
(၁) အနားကသူတှကေ သစ်စာဖောကျနိုငျတယျဆိုတာ
မသိနားမလညျတဲ့ အခြိနျမှာတော့ ကိုယျ့အနားက ယုံကွညျရတဲ့သူက သစ်စာဖောကျသှားရငျလညျး နာကငျြပွီး ခံစားရတဲ့ အခွအေနပေဲ ရှိပါတယျ။
ရငျ့ကကျြလာတဲ့အခါမှာတော့ ဒီလို အခွအေနတှေေ ရှိတတျတယျဆိုတာကို တှေးပွီး နာကငျြရတာ၊ သိလလေေ နာကငျြလလေနေဲ့ အနားကလူတှကေို သံသယ ထားရှိမှုနဲ့ ယတိပွတျ မယုံနိုငျမှုတှေ ရှိနရေတာကတော့ ရငျ့ကကျြသူတှရေဲ့ နာကငျြမှု တဈခုပါပဲ။
(၂) ကိုယျ့ကိုယျတောငျ ယတိပွတျယုံလို့ မရဘူးဆိုတာ
ငယျငယျကတော့ ငါက ဘာဆိုပွီး လကျမ ထောငျနိုငျပမေယျ့လညျး တဖွညျးဖွညျး အသကျကွီးလာတဲ့အခါ ရငျ့ကကျြမှုတှေ စတငျလာပါတယျ။
အဲ့ဒီနောကျမှာတော့ ကိုယျထငျခဲ့တဲ့ ကိုယျရဲ့ စိတျဆိုတာကလညျး အခုခြိနျမှာ အဲ့စိတျ မဟုတျတော့ဘဲ ဖွဈနတေတျပါတယျ။ ရငျ့ကကျြလာတဲ့နောကျမှာ ကိုယျ့ကိုယျကိုလညျး ဘယျလိုပါဆိုပွီး ယုံဖို့ မလှယျတာကို လကျခံလာရတာကတော့ အမှနျတရားပါပဲ။
(၃) ခဈြရတဲ့သူက စှနျ့ခှာသှားနိုငျတယျဆိုတာ
ငယျငယျကတော့ ကိုယျ့ကို ခဈြတဲ့သူက အမွဲတမျး ခဈြနမှောဆိုတဲ့ ခံစားခကျြမြိုး ရှိဖူးကွမှာပါ။
ဒီလို သိတာမြိုး ရှိခဲ့တာကွောငျ့ ရငျ့ကကျြလာတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယျ့ကို ခဈြတဲ့သူတှကေ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ထားသှားကွမှာကို သိနားလညျနခေဲ့ကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နာကငျြမှုကို သိတဲ့သူက ပိုပွီး ခံစားရတာ ဖွဈပါတယျ။
(၄) ဖွဈခငျြတိုငျးလညျး ဖွဈဖို့ မလှယျဘူးဆိုတာ
ငယျဘဝမှာတော့ ဖွဈခငျြတဲ့ အိပျမကျ၊ ဖွဈခငျြတဲ့အရာကို ရအောငျ လုပျမယျဆိုတာတှေ ရှိတတျပါတယျ။
တကယျတမျး ဘဝကို ရုနျးကနျရတဲ့အခါ ဖွဈခငျြတဲ့အရာတှေ ဖွဈဖို့ဆိုတာကလညျး အကွောငျးအကြိုးတှကေ အဆငျပွဦေးမှဆိုတာကို သိနားလညျမိကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ စိတျကူးယဉျပွီး ပြျောလို့ ရတာမြိုး နညျးလာပါတယျ။
(၅) ကိုယျ မထငျခဲ့ပမေယျ့ အမှားတှေ ဖွဈသှားခဲ့တယျဆိုတာ
ကိုယျ ရိုးရိုးလေး လုပျခဲ့တဲ့ အရာတှကေ အနာဂတျရောကျတဲ့အခါ ကိုယျ မလိုခငျြတော့တဲ့အရာ ပွနျပွငျခငျြမိတဲ့အရာတှေ ဖွဈသှားတတျပါတယျ။
ဒီလိုနဲ့ ရငျ့ကကျြလာသူတှကေ ကိုယျ လုပျသမြှ အရာတှကေိုတောငျ အမှားမြား ဖွဈမလား စိုးရိမျရငျး ရှငျသနျမိတတျကွပါတယျ။